Ọkwa dị elu nke a na -ahụ anya nke ogo 360 na -emegharị enyo enyo ụzọ na -emepụta ihe na ndị na -ebubata ya Wistron
Ogo a na -ahụ anya nke 360 ​​na -ewe iwe ọkụ na -echegharị enyo enyo
Agba: Agba niile nwere ike ịpụta
Ibu ibu: 40 tọn dị n'elu
Mee ka echiche nke ahịrị akara n'okporo ụzọ dị n'abalị mmiri ozuzo ebe ọ bụ na obere iko chaplet na thermoplastic anaghị atụgharị uche na mmiri mmiri ozuzo.
Na -eduzi okporo ụzọ n'okporo ụzọ awara awara ma ọ bụ gbagọrọ agbagọ n'abalị na mgbakwunye na ahịrị akara okporo ụzọ, yana inye gburugburu ebe nchekwa dị nchebe. Obere obere klaasị dị na thermoplastic na -ada ngwa ngwa; n'ihi ya, ntụgharị nke ahịrị akara okporo ụzọ na -agbada nke ukwuu. Omume mkpọtụ a ga -eme ka ndị ọkwọ ụgbọala mara mgbe ha gbanwere ụzọ
Oghere okporo ụzọ iko iko siri ike na -arụ ọrụ site na ịtụgharị azụ. A na -eweghachi ọkụ na -abata site na onye na -atụgharị ihe ngosi azụ n'otu ụzọ ahụ o siri bịa, maka ogo 360. Nke a dị mkpa na okporo ụzọ, ebe onye na -atụgharị uche na -egosipụta ọkụ nke ụgbọ ala site n'akụkụ ọ bụla na -alaghachi na ndị ọrụ n'okporo ụzọ, nke na -eduzi ma ọ bụ na -emenye ha ụjọ n'ọnọdụ ọnọdụ okporo ụzọ dị iche iche.
Ngwaahịa Glass Glass Road Stud
Ihe Agba nke mbụ Iko ọkụ na njide roba
Ibu ibu 40 tọn dị n'elu
Agba Agba niile nwere ike ịpụta
Nkwakọ ngwaahịa Ebubere na katọn na mbụ, yana 94pcs/ctn
Ngwa Okporo ụzọ awara awara, City Road
Ogwe okporo ụzọ iko siri ike dabara maka obodo mepere emepe na ime obodo. A na -eji ha eme ihe na mpaghara akụrụngwa, mana ha dịkwa oke mma maka ngwa ụlọ ma ọ bụ ihe eji achọ mma. N'ụzọ doro anya, ebumnuche abụọ ahụ nwekwara ike nweta n'otu ngwa.
A na -etinye okporo ụzọ enyo enyo siri ike n'ime elu ụzọ maka nduzi, ịdọ aka na ntị na njikwa okporo ụzọ. Ọ bụghị naanị na a na -ahụ ha anya mgbede na ọchịchịrị, mana ha na -ahụkwa ọhụhụ ka mma maka onye na -eji okporo ụzọ n'ehihie. Karịsịa na ọkụ ọkụ sitere na anyanwụ na/ma ọ bụ n'oké mmiri ozuzo, a na -ahụ okporo ụzọ okporo ụzọ iko siri ike karịa akara okporo ụzọ, nke a na -abawanye nchekwa okporo ụzọ nke ukwuu. Ọmụmaatụ nke ngwa bụ turbo roundabouts, oghere dị ize ndụ, okporo ụzọ ma ọ bụ okporo ụzọ, ebe ọha na ebe a na -adọba ụgbọala. Lee foto dị n'okpuru maka ntụle nke ngwa ndị ọzọ.
1. Enweghị ntụpọ n'ebe ọ bụla gbagọrọ agbagọ.
2.High ogo elu ekweghị ekwe na ileghara-àmà n'elu; ntụgharị uche nwere ike ịdịte aka.
3.High ike na ogologo anwụ ngwa ngwa.
4.The protruding akụkụ bụ 100% reflective.
5.Smooth elu na ọ dịghị mfe ịkpakọba uzuzu, nke na -achọghị nhicha na mmezi.
6.Fully akpaka mmepụta na ígwè.
7.The ndụ bụ ugboro 15 ogologo karịa omenala plastic pavement welara.
A na -enye nkwa afọ 8.5 maka okporo ụzọ zuru ụwa ọnụ (ọnụego mmebi ahụ erughị 5%).
Nke gara aga: Ìhè okporo ụzọ anyanwụ
Osote: Plastic Road Stud SD-RS-P5
Mkpọrọ okporo ụzọ Glass
Okpokoro Glass Solar Road Stud